Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2021 |
2021-06-29 @ 01:16 in Ankapobeny
Televiziona Malagasy no resaka. Nanao fanambarana ny mpitarika tao amin'ny TVM isorohana amin'izay mety ho sanatriavina tsy fetezan-javatra (fampitana feo sy sary) na fahadisoana teknika mety hitranga.
Nisy valiny izany andro vitsy monja taty aoriana.
Saingy nampiasaina indray izy hanao zavatra hafa. Dia ho andrasantsika ny tohiny.
Ary dia namoaka fanambarana indray ny avy ao amin'ny TVM ny alatsinainy 29 jona 2021. Amin'ny teny frantsay avokoa moa izany ny fandehan'ny resaka. Dia tsy nadika fa ataoko fa hain'ny maro ny teny frantsay izay nanabeazana sy nampianarana ny maro tamintsika.
Misy raha ao matoa lasa miitatra toy izao ity raharaha ity. Samy miandry isika hoe inona izay.